सावधान ! चिया पिएपछि भुलेर पनि सेवन नगर्नुहोस् यी चिज, नत्र लाग्नसक्छ अनेकथरी बिमारी – Khabar PatrikaNp
September 24, 2020 232
काठमाडौँ । सामान्यतया हामी धरै जसको दिनको सरुवात चीयाबाट हुन्छ । हामी सबैले बिहान र बेलुका चिया हामीले खाने गछौ ।हामीकतिमा चीयाको लत हुने गर्छ र चीया खाने समय भयो भनि हामीले भन्ने गछौ । चीया पिउनाले हाम्रो शरीरलाई पनि धेरै लाभ मिल्छ ।कामकाजी मानिसहरु आफ्नो कामको थकान मेटाउनलाई पनि चीया पिउने गर्छन् । मानिसहरुले चीयासँग बिस्कुट वा नमकिन पनि खान मन पराउछन्, तर कहिलेकाहीँ यस्ता चीजले हाम्रो शरीरमा हानी पुर्याउन सक्छन् । ** यो समाचार पुरा हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **
चीयामा हुने एंन्टीअक्सिडेन्टले केही प्रकोपबाट रक्षा गर्छ । यसको साथै चीयामा अन्य पनि धेरै त्यस्ता तत्व हुन्छन जसले शरीरलाई लाभ पुर्याउछ ।आज हामी यस्तो चीजको बारेमा जानकारी दिन चाहान्छौ, जुन कुरा चीयासँग सेवन गर्नुहुँदैन । यदि सेवन गरेमा गम्भीर बिरामी हुनपनि सकिन्छ ।
-खाली पेटमा चिया पिएपछि भिजेको चना खानु हुँदैन, अन्यथा हाम्रो शरीरमा सेतो दागहरू देखा पर्दछ ।-दुधको चिया पिएपछि माछा खानुहुँदैन नत्र यसले हाम्रो शरीरलाई कमजोर बनाइदिन्छ ।-दुधको चिया पिइसकेपछि हामीले कहिल्यै कागती खानु हुँदैन नत्र यसले हाम्रो पेटमा विष दिन्छ।
-चिया पिइसकेपछि पनि हामीले बेसनको पिठो केही परिकारहरु कहिल्यै खानु हुँदैन, किनभने यसले हाम्रो कपाल धेरै चाँडै सेतो हुन बनाइदिन थाल्छ ।-मानिसहरुलाई मुला सेवन गर्दा अनुहार र कपाल सफा हुने सम्भावना हुन्छ भन्दै अक्सर खाने गर्छन् । तर चिया पिएपछि कहिल्यै मुलाको सेवन गर्नु हुँदैन ।
-तातो चीया पिउने बित्तिकै पानी पिउन हुँदैन, त्यस समयमा पानी पिउँदा घातक सिद्ध हुनसक्छ । चीया पिउने बित्तिकै तुरुन्त पानी पिउनाले हाम्रो नाकबाट रगत आउन सक्छ ।-यदि चिया पिएपछि बेसार भएको दुध पिएमा जन्डिस रोग लाग्न सक्छ । यसकारण चिया पिएपछि बेसार हालेको दुध पिउनबाट बच्नु पर्छ
Prevवास्तुशास्त्रः पूजाकोठामा पितृको तस्वीर राख्दा हुन्छ अनिष्ठ
Nextबिहिबारको दिन विष्णु भगवानको यसरि पूजा गरौ ….! शुभफल प्राप्त हुन्छ !
घरमा नागदाेष भएमा यस्ता संकेतहरु देखिन्छ, समाधानको लागि ज्योतिषका सुझाव हेरी सेयर पनि गर्नुहोस
कुलमान घिसिङको ४ वर्षे कार्यकाल सकिएर उनी बाहिरिएसँगै वि’द्युत कटौती बढेको गुनासो बढ्न थाले